Wafdi ka socda Turkiga oo tegay Baledweyne – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Baledweyne – Mareeg.com: Wafdigan oo ka koobnaa 5 xubnood oo ka kala socday Safaarada Turkiga ee Soomaaliya iyo Hay’adda Bisha Cas ee dalka Turkiga, islamarkaana uu la socday guddoomiyaha Gobolka, Cabdi Faarax Laqanyo iyo Kuxigeenkiisa dhinaca maaliyada ayaa gaaray maanta magaalada Beladweyne ee Xarunta Gobolka Hiiraan.
Wafidga ayaa waxaa garoonka diyaaradaha ee Ugaas Khaliif ku soo dhaweeyay xubnaha Maamulka Gobolka, kan Degmada, Saraakiisha ciidamada, Odayaasha dhaqanka iyo qeybaha bulshada waxaana shir jaraaid ay ku qabteen garoonka diyaaradaha ee magaalada Beladweyne.
Wafdigan Dowladda Turkiga ah ayaa loo soo galbiyay xarrun ku taalla gudaha magaalada, iyagoo booqday xarumo ay ka mid yihiin dugsiga sare ee Axmed Warsame, Suuqa Xoola iyo Isbitalka Guud ee magaalada Beladweyne, iyagoo soo indho indheeyay xaalada guud ee xarumahaasi ka jirta.
Wafdiga Turkiga ah ayaa kaddib Kormeerkii ay ku kala bixiyeen Xarumahaasi guud, waxey sheegeen in ay wax weyn ka qaban doonaan baahiyaha ka jira magaalada Blaedwyne.
Xubnaha Turkiga ah ayaa kulan la qaatay Gobolka Hiiraan, kan degamda Baledweyne, Saraakiisha Ciidamada iyo Odayaasha Dhaqanka, iyadoo warbixino ku aadan soo dhawen iyo in gobolku uu u baahanyahay waxqabad balaaran loo gudbiyay Safiir ku-xigeen ka Safaarada Turkiga ee dalka oo wafiga ka mid ahaa, waxuuna sheegay in uu fariinta gaarsiin doono Safiirka iyo dowlada dalka Turkiga.
Wafdigaan Turkiga ah ee tegay Baledweyne ayaa ah kii ugu horreeyey ee Turki ah ee taga magaalada Baledweyne ee xarrunta gobolka Hiiraan.
Waxaa la filayaa in Turkigu mashaariic horumarineed ka fuliyo Gobolka Hiiraan, taasoo ay ugu soo horeyso dib u dhiska wadada dheer ee dhaxmarta gudaha magaalada Baledweyne.